Bitcoin Whales nọgidere na-azụta - CoinWorldMap
Bitcoin dara n'okpuru ọkwa uche nke $ 30 n'izu a na azụ nke nchegbu zuru oke banyere mwepu nke UST na dollar. Mgbukpọ a na-aga n'ihu na ndị ahịa na-atụ egwu na ndị isi stablecoins ndị ọzọ nwere ike ịgbaso otu ụzọ ahụ. Na Tọzdee, USDT, nke bụ mkpụrụ ego kasị ukwuu n'ụwa, nwere otu akara aka ahụ mgbe ọ dabara na $ 000 na mgbanwe ụfọdụ.
N'ihe banyere "egwu a na-atụ egwu", BTC eweghachila azụ ma na-ere ahịa ugbu a na $ 28 mgbe ọ gbasịrị obere oge ruo $ 991 n'ụtụtụ Tọzdee. A na-ewere ọkwa $ 26 dị ka mpaghara dị oke mkpa ka ọnụahịa si na mpaghara a maliteghachi n'afọ gara aga tupu ya enwee ngbanwe na-adịgide adịgide na-aga n'ihu na $ 700.
Otú ọ dị, ọdịda na-adịbeghị anya yiri ka ọ kpalitere ọrụ dị elu n'etiti Bitcoin whale ndị na-arụsi ọrụ ike ugbu a ịzụta ọdịda.
"Enwere ihe akaebe doro anya na adreesị bitcoin whale na-ahụ BTC na-ada n'okpuru $ 30k dị ka ihe omume mkpokọta. Santimentfeed edekọla ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke azụmahịa karịa $ 100K kemgbe Jenụwarị, ọnụ ọgụgụ ha na-ejide BTC na-abawanye, "Santiment dere banyere ya mgbe Bitcoin dara n'okpuru $ 30.
Na tweet ọzọ na Wednesday, Santiment kọrọ na ọnụ ọgụgụ nke bitcoins na-agagharị n'etiti adreesị kwa ụbọchị karịrị 300 n'izu a: "Anyị ahụbeghị ọkwa ọrụ a na netwọk BTC kemgbe February. Ehi na anụ ọhịa bea bụ ihe kacha emetọ anyị hụtụrụla. "
E jidekwala ọkwa ọrụ netwọkụ a na netwọkụ Ethereum: Ihe karịrị $1M na azụmahịa n'otu ụbọchị, nke kachasị elu kemgbe Jenụwarị.
Agbanyeghị, na Wednesde, ụlọ ọrụ cryptanalytic CryptoQuant kesara eserese na-egosi na ọnụego mgbanwe ahụ BTC kụrụ afọ 4,5 dị elu na 72H SMA. Ọnụ ego ntinye mgbanwe bụ nha nha nke azụmahịa mbubata 10 kacha elu na mkpokọta ntinye. N'ahịa ehi, ọ na-anọkarị n'okpuru 85%, ebe ọ nọ n'ahịa anụ ọhịa bea, ọ na-anọ n'elu 85%.
Firmlọ ọrụ ahụ dọrọ aka ná ntị maka ọdịda dị nso ma ọ bụrụ na oke ahụ gara n'ihu na-ebili, dịka ọ nwere tupu nrụpụta mega 2018. Dị ka otu ọkachamara si Twitter n'okpuru pseudonym IT Tech, ndị obere na akụkụ nke ndị na-eji ogologo oge nọ n'ọnọdụ ụjọ ma na-ere na mfu.
"Naanị LTH, nke nwere ihe karịrị $ 18 na bitcoin, na-ere uru ruo mgbe ọnụahịa ahụ dara n'okpuru $ 13," onye nyocha ahụ dere. - Enwere nhapụ ikpeazụ. Mgbe ọnụahịa ahụ dị ala, anyị na-abanye n'ahịa anụ ọhịa bea."